"မသွားပါနဲ့....အိမ်မှာပဲ စိတ်ချမ်းသာအောင်နေပေါ့..၊ ဒါမှမဟုတ် တလတန်သည်၊ နှစ်လတန်သည် ဆရာတော့်ကျောင်းမှာ ဦးပဉ္ဇင်းဝတ်နေမလား.."
သားဖြစ်သူက သူ..မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲနေပြီဖြစ်ကြောင်း အမေဖြစ်သူကို အတိအလင်းကြေညာထားပြီး ဆေးစစ်မှုခံယူကာ မူး ယစ်ဆေးဝါးအစားထိုးအဖြစ် ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် တိုက်ကျွေးသော မက်သဒုံးဆေးကို သောက်ချင်သည်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဆေးစွဲနေသူလူငယ်တဦးအဖြစ် တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများထံ ဝန်ခံလိုသည်။ အမေဖြစ်သူ၏ခံစားချက်ကို နားနှင့်မကြားရသော် လည်း ရင်နင့်ခံစားသိမိသည်။ သူမ၏သားလေးကို လိုင်စင်ရမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲနေသူတဦးအဖြစ် မမြင်လို...မကြားလို...။
ညဦးပိုင်းကတည်းက ပြင်ဆင်ထားသော ပစ္စည်းပစ္စယများအားလုံးကို သေချာအောင်ပြန်စစ်လိုက်သည်။ ဆိုင်ကယ်နောက်ပိုင်းတွင်တင်ထားသည့် ဝါးပုတ်ကြီးကို အဖုံးလှပ်၍ ပြန်ကြည့်ဖြစ်သည်။ ရောင်စုံဘူးဆိုဒ်မျိုးစုံဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသော ကိတ်မုန့် တိုက်များ အစီအရီဖြင့်နေသားတကျ သပ်သပ်ရပ်ရပ်...။
အနေအထားမပျက်ရှိနေသော မုန့်ဘူးလေးများကိုကြည့်ရင်း ကျေနပ်သွားမိသည်။ ကရင်မ်ပါးပါးလေးသုတ်၍ ချောကလက် ချောင်းရောင်စုံလေးများ တင်ထားသော မုန့်ဘူးလေးများကို ပိုပြီးသတိထားသယ်ဆောင်ရမည်။ သွားမည့်လမ်း၏ အဆင်း အတက်၊ အကွေ့အဝိုက်တွင် မတော်တဆလှုပ်ခတ်လွန်းပြီး အလှပျက်မှာ စိုးရသေးသည်။ သူ့တွင် အလှဆင်ထားသော ကရင်မ်လေးများက ဘူးခွံမျက်နှာပြင်ကို ပေကျံကုန်လျှင် လမ်းခရီး၌ပြင်ဆင်ရန် အလွန်ခက်ခဲလှသည်။ ပြောမယ့်သာ ပြောရသည်။ သူတင်မဟုတ်..ကျန်သည့်ကိတ်မုန့်ဘူးလေးများအားလုံးကိုလည်း အလှမပျက်စေဖို့ ဂရုစိုက်ရသည်သာ...။
သူတို့အားလုံးတွင် ဂျုံ၊ ကြက်ဥ၊ ဆီ၊ သကြား၊ ထောပတ်သာမက မုန့်နုဆေးကအစ..တူညီစွာ ပါဝင်ကြသည်။ ပြီးတော့ တခု ထဲသော မုန့်မွှေစက်အတွင်းမှထွက်ပြီး တခုထဲသော မုန့်ဖုတ်မီးဖိုကြီးထဲဝင်ကာ ရနံသင်းသောမုန့်လေးများအဖြစ် အသွင် ပြောင်းလာကြခြင်းသာဖြစ်သည်။ စားကြည့်ပြီး ... တစိမ့်စိမ့်အရသာခံကြည့်လျှင် တူညီသောအနှစ်သာကို ရှာတွေ့မည်မှာ သေချာပါသည်။ အပေါ်ယံအလှဆင်ထားခြင်းသာ ကွဲပြား၏။
အကျင့်ပါနေသဖြင့် မိုးကောင်းကင်ကြီးပေါ် တချက်မော့ကြည့်ဖြစ်သည်။ တိမ်ကင်းစင်နေသည်ဟူ၍တော့မဆိုသာ...။ တိမ်မည်းမည်း တချို့ကိုတော့ ပျောက်တိပျောက်ကြားတွေ့နေရသည်။ မိုးသည် ချက်ချင်းကြီးတော့ ရွာသေးမည်မဟုတ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ ဝင်တိုးလာသည့် နံနက်ခင်းလေနုအေးလေးက စိတ်ကိုကြည်လင်သွားစေသည်။ လက်ဝဲဘက်ကိုကြည့်မိ သည်။ မြိူ့ငယ်လေး၏ ပြည်သူ့ဆေးရုံသည် နိုးထစပြုနေပေပြီ။
အနားရောက်လာတော့မှ လူငယ်တယောက်ဖြစ်မှန်းသိရသည်။ လွယ်အိတ်အပြာရောင်လေးလွယ်ထားသော လူငယ်ထံမှ သင်္ကာရနံ့မကင်းသောအကြည့်တချက် ရောက်လာသည်။ သူ့ကိုလှစ်ခနဲ ပြုံးပြလိုက်ပြီး...
"ညီလေး....၊ အစ်ကိုလမ်းပျောက်နေတယ်ကွာ။ အတော့်ကိုကြာပြီ... ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်ပြန်တက်ချင်လို့.."
လူငယ်လေး၏မျက်နှာမှာ စောစောကလို ခပ်တင်းတင်းအနေအထားများမရှိတော့..။ မယုံမကြည်အမူအရာများ လျှော့ပါး သွားသည်။ လမ်းလက်စ ခြေလှမ်းများ အရှိန်သတ်ကာ ရပ်တန့်ပြီး...၊
"အေး..ညီလေး..၊ မင်္ဂလာအိမ် မုန့်လာပို့တာပါကွာ..၊ ပြန်အထွက်...မျက်စိလည်သွားတယ်.."
လက်ကြားမှာပါလာသည့် ဆေးပေါ့လိပ်လေးကို မီးညှိလိုက်ရင်း...
"အေး...အစ်ကိုက. လမ်း ပြန်တွေ့ရင် ဟိုး...တောင်ပေါ်က. ..ကန်ကြီးတွေဘက်ကို ပြန်မှာလေ.."
သေချာကြည့်နေသော သူ့မျက်လုံးများကြောင့် ခေါင်းမှာဆောင်းထားသော ကွန်မန်ဒိုကွက်ကြား လျှာထိုးဦးထုပ်ကို အလျှင် အမြန် ချွတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ရှပ်အင်္ကျီလက်ရှည်ကိုပါ ချွတ်လိုက်သည်။ ညာဖက်လက်မောင်းပေါ်မှာ ထိုးထားသည့် "သေနတ်နဲ့ နှင်းဆီ" စာတန်းရေးထားသော တက်တူးပုံလေးကို သူသေချာစိုက်ကြည့်နေသည်။ လမ်းမေးသည်ကို မဖြေသေး ပဲ...
သူ့လက်ထဲမှ ဆေးပေါ့လိပ်သည် အတော်ပင်တိုနေပြီ ဖြစ်၏။ တံဆိပ်စက္ကူပတ်ညှော်နံ့ပင် ထွက်နေပြီ။ သူ့လွယ်အိတ်ပြာ လေးထဲမှ ဆေးပေါ့လိပ်တလိပ်ကိုနှိုက်ပြီး ....
ဆေးလိပ်တံဆိပ်ပတ်လေးတွင် နေပြည်တော် ဟူသည့် စာတန်းလေး ရေးထိုးထားသည်။ တခါမှတော့ မသောက်ဖူးခဲ့...။ ဟိုး...အရင်...၊ လူငယ်ဘ၀ကတော့ ဂစ်တာတလက်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးမအေးခင်ဆေးပေါ့လိပ် တလိပ်ရှိလျှင် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဘဝဟု ယူဆခဲ့ဖူးပါသည်။ အချိန်သည် အမြဲတမ်းလည်ပတ်နေသည်။ အရာရာသည် ပြောင်းလဲနေသည်။ အခုတော့ ဂစ် တာနှင့်ဆေးပေါ့လိပ်သာမက...၊ နေပူပူမှာ ငွေကိုလိုက်ရှာနေရပြန်သည်။ ငွေပူပူကို အရိပ်အောက်မှာမလိုချင်၍၊နေပူထဲထွက်ပြီး ငွေစမ်းချောင်းလေးကို လိုက်ရှာရတာကို ပင်ပန်းသည်ဟု မယူဆမိသော်လည်း...၊
"ဗိုက်ဆာတယ်ကွာ...၊ မင့်မှာ မုန့်ကျန်သေးလား..."
"ကောင်းတာကွာ...၊ ငါထမင်းမစားတာ နှစ်ရက်ရှိပြီ...မင်း...ဆေးချအုံးမလား..၊ ငါ့မှာရှိတယ်.."
မမျှော်လင့်ထားသော စကားများသည် အတော်ပင်ခေါင်းနားပန်းကြီးသွားစေသည်။ ပျာပျာသလဲမငြင်းရဲ...။ အလိမ္မာလေးဖြင့် သာ ငြင်းရ၏။ အတော်ပင် စိတ်မောသွားသည်။ စိတ်မောခြင်းသည် လူမောခြင်းထက်ပို၍ ပင်ပန်းစေပါသည်။
"ငါ...မလုပ်ချင်ဘူးကွာ...၊ လောလောဆယ် အိမ်ပြန်ချင်တာပဲ သိတယ်..၊ လမ်းပြောပါအုံး။"
"ငါက ခင်လို့ မင့်ကိုပြောတာပါ...၊ မနေ့ညက တောင်ပေါ်မှာအလုပ်သွားလုပ်တော့ လုပ်အားခတွေ အများကြီး ရခဲ့တာလေ..."
"အတော်ပဲကွာ....၊ ငါလည်းရချင်နေတာ၊ မင့်ဆီတောင်းမလို့ပဲ.." ဟု... ရေသန့်ဗူးလေး လွယ်အိတ်ထဲ ထည့်ရင်း ပြောလိုက် သော စကားသံသည်၊ တစုံတရာအတွက် စိတ်အားတက်ကြွနေမှန်း သိသာလှ၏။
လှပသောတောင်ကမ်းပါးရံကြီးဘေးမှ အဖြတ်တွင် သူ့အလှကိုမနစ်မြောနိုင်အား...၊ဘေးတဖက်မှ ချောက်ကမ်းပါးကြီးကို သတိထားနေရသည်။
ဆယ့််နှစ်ဘီးကားကြီးကျော်အတက်ကို ရှောင်ဖို့ ဆိုင်ကယ်ကို လမ်းနံဘေးအချ၊ ပုတ်အတွင်းမှ လက်ကျန်မုန့်လေးများ လှုပ်ခါသွားတာ သိလိုက်ပါသည်။ သူတို့ အလှပျက်ကြတော့မည်။ တကယ်စီးနင်း သူများသာ လမ်းမကြီး၏လိုအပ်သည်ထက် ကျဉ်းမြောင်းနေမှုကို ဒုတ်ဒုတ်ထိ ခံစားသိကြရသည်။တောင်ပေါ်ဒေသလေး၏ ရာသီဥတုက အပြောင်းအလဲမြန်လှပေသည်။ တိမ်စိုင်တိမ်မည်းများ ရုတ်ခြည်းရောက်လာပြီး မိုးသည်။ သည်းထန်စွာရွာလေပြီ...။
မြို့လေးထဲသို့ စိုစိုရွဲရွဲရောက်လာသဖြင့် အားလုံးက ဝိုင်းကြည့်နေသည်မှာ မြို့အဝင်ကတည်း က...။